Iza no milaza fa tsy manana fihetseham-po ny alika? | Tontolo alika
Iza no milaza fa tsy manana fihetseham-po ny alika?
Anthony Carter | | Alika ankapobeny
Mbola tadidiko ny fanazavan'i Miss Augustina, mpampianatra EGB kilasy faha-2, tamiko maninona no tsy tian'ny alika toy ny olona, ary satria tsy nanana fanahy izy ireo, ary toa zavaboarin'Andriamanitra koa izy ireo, dia olona ambany kokoa ... nisy ny fandinihana nanaporofo izany.
Tamin'izay fotoana izay dia tsy hitako izay havaliny azy. Androany no itondrako anao ity lahatsoratra ity ho valin'ny tenako, ary mazava ho azy, tiako hizara aminao izany. Avelako amin'ny fidirana ianao: Iza no milaza fa tsy manana fihetseham-po ny alika?
Tena sarotra (saika tsy azo atao) ho an'ny tompon'alika, ny biby fiompiny tsy manana fihetsem-po na fihetseham-po. Izay manana alika dia hilaza aminao fa ny alikany mila miteny fotsiny ianao vao ho olona. Na izany aza, mbola misy ampahany amin'ny vondrona siantifika iraisam-pirenena izay manizingizina ny momba an'io. Avy aiza ireo feo ireo ary inona no tanjon'izy ireo, no lohahevitra izay mibahana ao amiko amin'ity lahatsoratra androany ity.
Andao atomboka ny motera ...
1 Fihetseham-po sy fahatsapana ao amin'ny alikanay
2 Iza no mahazo tombony?
3 Ary any Espana?
4 Avy aiza ny zava-drehetra
5 Misy mahalala ny anarana roa farany?
6 Misy fofona maimbo any Danemark
7 Manala ny teoria an'i Fred
Fihetseham-po sy fahatsapana ao amin'ny alikanay
Sarotra be ny milaza fa tsy manana fihetsem-po ny alikaNa izany aza, nandritra ny taonjato maro, ny vondrom-piarahamonina siantifika iraisam-pirenena dia nametra-panontaniana momba ny fahafahan'ny alika ihany, fa ny an'ny biby rehetra koa, mba ho feno fientanam-po hahatsapa sy handika ny fihetsem-pony amin'ny ambaratonga mahatsiaro tena. Tsy manomboka izao.
Ny mpahay siansa sy ny mpikaroka ny dian-kapoka rehetra dia efa ela no nihazona ny teoria fa ny alika dia tsy nanana fihetsem-po na fihetseham-po. Descartes, ohatra, dia nilaza momba ny alika fa milina mihetsika izy ireo (Machina Animata izay nilaza ny), ary ankehitriny dia misy karazana teoria momba ny fomba tsy afaka mahatsapa na mientanentana ilay alika.
Ny veterinera sy profesora momba ny siansa momba ny biby Fred Metzger, manana ny teoria azy manokana momba izany:
alika tsy mahatsapa ny fihetsem-pony toa antsika isika. Tsy tia toa antsika izy ireo. Ny ataon'ilay alika dia ny fampiasam-bola amin'ny zanak'olombelona, ​​ny fampivelarana ny karazana fitondrantena rehetra izay ahazoana fitiavana na sakafo. Amin'izany fomba izany, arakaraky ny maha-malefaka sy ara-pihetseham-po kokoa ny biby no mahaliana azy bebe kokoa. Tsy ela ny alika dia nitantara fa arakaraka ny itiavany ny fitiavany no hampitomboany ny tambiny, ary izany no ataony, manahafana ny fitiavana.
Mino aho fa raha avelantsika kelikely miaraka amin'ny mpifanila vodirindrina amintsika ny alika, ary manome valisoa mitovy amin'izany izy ireo dia ho tian'ny alika tsy ho ela toy ny tompony.
Izaho manokana, alohan'ity fanambarana a Profesora momba ny siansa momba ny biby, Tsy maintsy gaga aho. Na eo aza ny tsy fahatairana ankehitriny amin'ny hevitro manokana momba ny teôria Doctor Metzger, dia handeha aho ary avy eo Hiezaka ny hilaza ny fomba fijeriko aho momba izay noteneniny, ary momba izay tsy nijanonany intsony.
Ankehitriny, amin'ity fotoana ity dia te-hametraka fanontaniana tsy mahazo aina roa aho:
Mazava fa androany, ny fironana ankapobeny dia ny tsy famotopotorana ny antony tsy amam-pihetseham-po ny alika, fa ny mifanohitra amin'izay no izy. Ny fifandraisana misy eo amin'ny alika sy ny olombelona ary ny fandalinany dia hita ao amin'ny fandinihana farany ataon'ny fiarahamonina siantifika iraisam-pirenena, izay tsy ny etôlôjiana, mpitsabo biby ary mpanabe ihany no mandinika alika sy ny faharanitan-tsainy, fa koa ny neurolojista, biolojika ary koa ny sosiolojia. Miezaka mafy izy rehetra asehoy fa faly sy mahatsapa ny alika. Miaraka izy ireo dia mitady fomba vaovao hanaovana ity fifandraisana ity izay mampiavaka antsika manokana amin'ny alika izay matanjaka sy manankarena ary voajanahary kokoa, ka amin'ny alàlan'ny fomba vaovao dia manararaotra manararaotra tsara kokoa ireo fananana goavambe izay entin'ity fifandraisana ity ho an'ny olombelona izahay, sy izay mety ho fampiharana rehetra. manana ...
Raha izany no izy, iza no manao fandinihana hanaporofoana ny mifanohitra amin'izany? Iza no mandany vola hanaporofoana fa tsy mahatsapa fihetseham-po ny alika? Iza no liana? araka ny nolazain'ny Romana: Cui Bono?
Ary eo no manomboka ny haizin'ity olana ity.
Iza no mahazo tombony?
Manomboka amin'ny fanekeko aho fa tsy te handinika lalina an'io lohahevitra io, satria maharary ahy ny mahita lahatsoratra sy mamaky momba ny fanandramana biby, na izany aza dia nanao ezaka aho mba ho marina araka izay azo atao ary eto dia avelako ny fehin-kevitrao. . Mianiana aho fa hatramin'ny fahazazako Halako izay rehetra mifandraika amin'ny fitsapana biby Ary satria ity lohahevitra ity dia fampiharana amin'ny fihatsarambelatsihy eo amin'ny sehatra sosialy, na izany aza, dia hifantoka amin'ny ezaka ataoko amin'ny fampahafantarana anao araka izay azo atao ihany koa aho. Ary io ilay lohahevitra nanjary potipotika.
Eny, nandritra ny taonjato maro, ny olombelona dia nanandrana biby. Ny fivoaran'ny fitsaboana dia miorina amin'ny fatin'ny biby an-tapitrisany, manomboka amin'ny voalavo ka hatramin'ny soavaly. Ary izany dia asa lehibe foana.
Androany, misy maro orinasa mivarotra biby hanaovana andrana siantifika. Ireo orinasa ireo dia tany Etazonia taloha, na izany aza, tao anatin'izay am-polony taona lasa izay, orinasa samihafa no nosokafana izay natokana hananganana biby ho fanandramana ara-pitsaboana siantifika. Midika izany fa, ohatra, ny orinasa toa ny Noveprim, izay natokana ho amin'ny fiompiana gidro ho fanandramana, ary manana karazana gidro ho an'ny fanandramana voasoratra amin'ny zon'ny mpamorona, dia nanangana ivon-toeram-pananahana ao Camarles, Tarragona, avy aiza no orinasa mpamatsy entana any Eropa. Ity orinasa ity dia nividy antsasaky ny anjarany tamina orinasa iray hafa tao amin'ilay sehatra, COVANCE, izay natokana hanomezana tolotra ho an'ireo orinasa siantifika sy pharmaceutika, na dia ny Tafika amerikana aza no mpanjifa lehibe ao aminy.
Ary any Espana?
Any Espana dia andrana biby koa izy io. Ny Oniversite Complutense any Madrid dia manana salan'isa 50 eo ho eo amin'ny fanandramana, ny karazana Beagle rehetra, izay karazan-kazo izay matetika ampiasaina amin'izany. Ireo alika ireo dia amidin'ny orinasa iraisam-pirenena izay natokana ho an'ny serivisy fikarohana siantifika, toa an'i Harlan Iberica, Charles River na B&K Universal. Ireo orinasa ireo dia mivarotra fiainana misy zavamananaina, ary mahazo vola be amin'izany. Ny vidin'ny Beagle hanaovana andrana dia manodidina ny 1000 Euros. Ny vidin'ny Beagle, ho an'ny olona tsirairay, miaraka amin'ny tetirazana, dia tsy hihoatra ny 500 eu. Araka ny hitanao dia tsy fitovizany izany.
Na dia imbetsaka aza isika tsy mahafantatra an'io, raha ny tena izy, maro amin'ireo vokatra laninay isan'andro no andrana amin'ny biby. Ny kosmetika, zava-mahadomelina, sakafo, fitaovana vaovao, ary maro hafa, dia notsapaina taloha niaraka tamin'ny namantsika sakaiza (sy biby maro hafa, eto isa ofisialin'ny biby ampiasaina any Espana), ary ny fampiasan'izy ireo dia miitatra amin'ny sehatra hafa, avy amin'ny Oniversite, izay ampiasain'ny mpianatra hizaha toetra ny sampana toy ny fitsaboana na fitsaboana ara-biby, na noho ny tanjon'ny miaramila, dia aleoko tsy manome hevitra momba ny fahasalamako ara-pihetseham-po.
Ireo karazana orinasa ireo dia nampifantoka ny doka tamin'ny fanaovana dokam-barotra, nifantoka tamin'ny fomba tian'izy ireo hahitanay ny orinasan'izy ireo, am-polony taona lasa izay, tamin'ny fampisehoana tamin'ny alalàn'ny fandalinana siantifika momba ny vokatra azo antoka, izay tsy tsapan'ny bibyTsy nanana fihetseham-po akory izy ireo. Nanamora ny faneken'izy ireo ny hevitry ny besinimaro izany, izay nanamora ny fivelaran'izy ireo ho orinasa. Tsy mora ny mahazo mpampiasa vola raha mieritreritra ny asanao fa mpamono biby ianao. Mora azo izany.
Noho io antony io dia nanokana ampahany lehibe amin'ny tetibolan'ny dokam-barotra hatrizay ity karazana orinasa ity miezaha hanana fanekena tsara kokoa eo amin'ny hevitry ny besinimaro, ary noho io antony io, ny iray tamin'ireo andrana voalohany nataony dia ny nanandrana naneho fa tsy manana fihetsem-po na fihetseham-po toa ny an'ny olombelona ny biby. Na dia ilay antsoina hoe Emotional Intelligence aza dia tsy nianarana tahaka ny ankehitriny, ny andrana voalohany nataon'ny milina indostrikan'ireto orinasa ireto dia ny fanapahana ny fifamatorana izay ananan'ny olombelona, ​​ara-pientanam-po amin'ny biby, ary indrindra amin'ny alika. Ny fomba nanandramany nanapaka an'io fatorana io dia tamin'ny alàlan'ny fandalinana izay, tamin'ny alàlan'ny teoria toa ny an'ny Profesora Metzger, dia naneho fa tsy nijaly toy ny olombelona ny alika, ary izany dia nahatonga azy ireo ho lohahevitra fanandramana mety. Araka ny nolazaiko anao.
Na izany aza, tsy nahatratra an'io hevitra io tsy teo alohan'ny mpitia biby, ary ny fitiavantsika ny alikantsika, dia niteraka fandalinana siantifika tsy tambo isaina, miaraka amin'ny valiny voaporofo sy azo antoka, izay milaza amintsika raha tsy izany.
Inona no nataon'ireo orinasa ao amin'ity sehatra ity manandrama manamaivana ny fiatraikany ratsy Inona no mamorona ny asanao eo amin'ny sehatry ny orinasa eo imason'ny besinimaro? Ataovy izay hitako amin'ny sidina mandroso. Na dia mazava ho azy aza, raha omena ny fitaovana misy an'ity sehatry ny indostria ity dia mety handeha tsara ho azy ireo izany. Ary avelao aho hanazava.
Avy aiza ny zava-drehetra
Rehefa manandrana manazava kely an'ity olana ity aho, ary mahita hoe avy aiza ny fanadihadiana izay nanohana ny tsy fisian'ny fihetsem-po amin'ny biby, dia nahita aho tambajotram-pifandraisana iray manontolo, orinasa sy vondrona mpiaro ny fanandramana biby. Rehefa mamaky ny namako ianao.
Ireto fikambanana ireto, miaro ny filàna fanandramana amin'ny biby ary mampiditra teny toa ny Bioethics na fiompiana biby izy ireo, ary lazain'izy ireo amintsika ny fomba azo antoka sy ny fitsipika fototra toy ny 3R's (Manolo ny fampiasana biby amin'ny kolontsaina sela na simulation amin'ny solosaina raha azo atao, ahena ny isan'ireo biby amin'ireo tena ilaina sy Amboary ny fomba ampiasaina hampitomboana ny fiahian'ny biby), mba hanamarinana ny asan'izy ireo, ary amin'izay dia mankafy ny fotoana mitovy amin'ny orinasa hafa.
Nampiasain'izy ireo fa ny firaisana dia ny tanjaka ary ny fifandraisan'ny orinasa eo amin'ny sehatra, rehefa mitady raikipohy dokam-barotra izay manala ny endrik'izy ireo ratsyTena lehibe sy matanjaka izy io, ary tsy takatry ny sain'ireo fikambanana sy fiarahamonina samihafa manerantany toa ny:
Fikambanam-pirenena ho an'ny fikarohana biomédical (US)
Fahatakarana ny fikarohana biby (UK)
Miresaka momba ny fikarohana
Fikambanana Basel Declaration (Soisa)
Groupe interprofessionnel de reflexion sy ny fifandraisana sur la recherche GIRCOR (FR)
Stichting Informatie Dierproeven (NL)
Amerikanina ho an'ny fandrosoana ara-pahasalamana (US)
Pro-test Deutschland (AVY)
Ary misy koa fikambanan'ny kaontinantaly, ohatra EARA(Association European Animal Resarch Association) izay vatsian'ireo voalaza etsy ambony ireo, izay avy eo dia vatsian'ny orinasa manome serivisy ho an'ireo orinasa mpikaroka. Andao hametahana bokotra ho santionany:
El SECAL is the Fikambanana Espaniôla momba ny siansa momba ny biby any amin'ny laboratoara, izay ny kinova Espaniola an'ireo vondrona voalaza etsy ambony. Ity Fikambanana ity dia mamatsy vola ny orinasa toy ny:
Misy mahalala ny anarana roa farany?
Mbola hanatsoaka hevitra ihany aho avy eo.
Ireo orinasa ireo sy ny maro hafa dia mamatsy vola ny Fikambanana Espaniôla momba ny siansa momba ny biby any amin'ny laboratoaraamin'ny fanomezana mahomby, ary ho setrin'izany, ity fikambanana ity, dia mampiroborobo ny tombony ho an'ny olombelona sy ny mila fanandramana biby amin'ny endrika isan-karazany sy fomba azo atao. Ohatra, ny fanomezana fiofanana amin'ny endrika taranja, seminera ary kongresy, izay andraisan'ny mpampianatra profesora ao amin'ny oniversite, dokotera ary ny talen'ny andrim-pianarana sy ny siansa siantifika mpandahateny, ary izy ireo matetika no mpanjifa lehibe amin'ireo orinasa ireo. Ary aza hadinoina fa ireo orinasa rehetra ireo dia manana fanampiana ara-panjakana sy eoropeanina amin'ny R&D.
Noho izany, ireo mpandahateny an'ity karazana hetsika ity, izay karakarain'ny SECLA, manana fifanarahana mivantana izy ireo, amin'ny alàlan'ny asany matihanina samihafa, miaraka amin'ireo orinasa mamatsy vola azy.
Misy fofona hafahafa ve?
Misy fofona maimbo any Danemark
Miaraka amin'ity teny nalaina avy tao amin'ny Hamlet ity, Mifantoka amin'ny andian-kevitra manokana aho, Te hizara aminao aho, ary manantena aho fa hanampy anay ianao fantaro ny sakan'ity lohahevitra ity.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny sampan-draharahan'ny oniversite sy andrimpanjakana siantifika samihafa eto amin'ity firenena ity, Mividy biby izy ireo hanaovana fanandramana amin'ireo orinasa isan-karazany ao amin'ity sehatra ity, ankabeazan'ny orinasa maro an'isa, izay mamatsy ara-bola ny fiarahamonina siantifika sy ny fikambanana toa an'i SECLA, izay mampiroborobo ny filàna fanohizana fanandramana ary miresaka momba ny foto-kevitra toy ny bioethics sy ny fiahiana ny biby amin'ny biby laboratoara, ary izay mampiroborobo andiam-pitsipika maha-olombelona ho an'ny biby, ary manome fiofanana, amin'ny alàlan'ny fampianarana, lahateny, fivoriana ary kongresy, izay ny mpiteny lehibe indrindra dia ny talen'ny, mpampianatra. , dokotera sy mpahay siansa ao amin'ny departemantan'ny orinasa voalaza etsy ambony.
Raha tsy mampiahiahy, farafaharatsiny liana te hahafanta-javatra. Indrindra rehefa ireo oniversite sy oniversite ireo, Mividy alika Beagle izy ireo amin'ny salanisa 1000 euro ho an'ny biby tsirairay. Fantatro fa hisy olona hanandrana hanazava amiko fa ireo alika ireo dia mifandanja ara-pirazanana, ary izy ireo dia karazany manokana afaka amin'ny aretina sy ny kileman-toetran'ny firaisana ara-nofo, na izany aza, averiko ... 1000 euro ho an'ny Beagle ...
Amin'ny hatchery tsara, iray toa Decasla, izay tsy mora vidy satria mahafeno ny fepetra rehetra azo atao, ary manana traikefa 20 taona, alika Beagle miaraka amin'i Pedigree, manana vidiny 400 euro. Heveriko fa fahasamihafana io toooooooda io.
Ary izao no fiasan'ny any Espana. Any Etazonia, ny orinasa dia mamatsy vola mivantana Manome vatsim-pianarana sy famatsiam-bola fikarohana ho an'ny mpahay siansa sy talen'ny andrimpanjakana sy fikambanana siantifika ny departemantan'ny oniversite.
Midika izany fa misy ny mpitsabo biby sy profesora amin'ny siansa momba ny biby, mampivelatra ny karazana isan-karazany izy ireo teôria sy fandalinana manampy ny indostrian'ny orinasa hiafara amin'ny famatsiam-bola azy ireo. Ary tsy te-hanondro ny misy an'i Fred aho, maninona no ratsy tarehy ny manondro an'i Fred, raha tsy izany ...
Manala ny teoria an'i Fred
Mifantoka mivantana amin'ny teoria Fred Metzger momba ny anti-panahy tsara, mpikaroka, profesora ary mpitsabo biby ao amin'ny University of Pennsylvania, izay raha ny fahitako azy, andiana hadalana nolazain'ny olona iray izay tokony hahalala izay lazainy, misy ampahany, ny ampahany amin'ilay fanambarana ny teoria, izay ametrahany ohatra azo ampiharina hanampiana fahatokisana, izay mampino indrindra fa ny matihanina dia milaza izany amin'ny famerenany.
Tena, Matetika aho no natahotra. Mazava izany no lazaiko ary manazava ny tenako aho. Dokotera Metzger taloha milaza amintsika:
"Heveriko fa raha avelantsika kelikely miaraka amin'ny mpifanila vodirindrina amintsika ny alika, ary manome valisoa mitovy amin'izany izy ireo dia ho tian'ny alika tsy ho ela toy ny tompony"
Ny alika dia biby fiarahamonina. Izy ireo dia mamorona fifamatorana ara-pihetseham-po amin'ireo olona iarahan'izy ireo miaraka amin'ireo izay manana fifandraisana tsara (sy amin'ireo izay tsy manana), satria ao anatin'ny andiany dia ilaina ny manana fifandraisana, ary matetika ireo dia miorina amin'ny antony manosika sy tanjona iraisana. Manaraka ny ohatra nomen'i Fred taloha, raha avelantsika ho an'ny mpiara-monina amintsika ny alika kelintsika, ary omeny loka sy valisoa izy, dia hanana fifandraisana ara-pihetseham-po amin'ilay mpifanolobodirindrina aminy izy, na izany aza tsy hataony amin'ny fanoloana ny fifandraisany. miaraka aminay amin'ny iray vaovao. hanana fifandraisana vaovao amin'ny olona iray ianao, izay tsy tokony hitovy amin'ny iray aminao.
Ny alika dia biby misy fihetsem-po sy fihetsem-po fa tsy milina mamokatra fitondra-tena maromaro rehefa miatrika fanentanana. Tena ara-dalàna ny alika iray ihany ny mamolavola fihetsika samihafa alohan'ny fanentanana iray ihany, izay avy amin'ny olona samihafa. Izany dia vokatry ny ny alika dia zatra ny toe-javatra ary miova amin'ny fomba mitovy amin'ny olombelona, amin'ny alàlan'ny fihetsem-po sy fihetseham-po. Ary ohatra tsotra no nataoko.
Raha io alika io ihany dia entin'ny olona maromaro eny an-dalambe dia hanana fihetsika samy hafa amin'ny tsirairay ny alika, miankina amin'ny toetrany sy ny fifandraisany amin'ilay alika. Tsy maninona na dia manome loka mitovy aza izy ireo, ny alika dia hifanaraka amin'ny toe-javatra, ary hitondra tena amin'ny fomba samy hafa amin'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny vondrona misy azy. Ary angamba na dia samy manome loka sy valisoa mitovy aza izy rehetra, ny fifandraisanao amin'izy ireo dia ho hafa amin'ny tsirairay amin'izy ireo, izay araka ny nolazaiko teo aloha, miankina amin'ny toetran'ny tsirairay izany ary ny fifamatorana ara-pihetseham-po ananany amin'ny alika.
Farany, ny ohatra omen'i Fred antsika dia misy lesoka amin'izany tsy miraharaha tanteraka ny psikolojia an'ny biby, ary mifantoka mivantana amin'ny lafiny tokana amin'ny fifandraisan'ny alika olombelona, ​​manome endrika kinova-toe-javatra ny toe-javatra, izay nanatsoahany fehin-kevitra haingana izay tsy azo tanterahina velively. Tena tsy haiko hoe ahoana ny olona miaraka amin'ny rakitsorany akademika dia afaka miteny toy izany izyraha tsy hoe liana amin'ny filazana azy ianao.
Mahagaga fa indraindray, mamaky karazana lahatsoratra sasany isika, manazava ireo karazana teoria sy fandalinana, fa mora ny manontany tena, rehefa avy mamaky azy ireo, inona ny henjana siantifika ary inona no tanjon'izy ireo, ary imbetsaka isika vao mila mampihatra ilay Cui Bonus, hahafantarana hoe aiza izy ireo no mitsangana ary iza no liana. Mila mamaky fotsiny ny lahatsoratr'i Dr. Metzger ianao vao hahatakatra azy. Eto aho avelako ...Fanontaniana manaporofo: Tena tia ahy ve ny alika?
Tsy misy resaka intsony, avelako ianao mandra-pahatongan'ny lahatsoratra manaraka. Mifalia ary karakarao ny alikanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Iza no milaza fa tsy manana fihetseham-po ny alika?
Ny toetra mampiavaka ny Carlino
Fandriana alika vita amin'ny paleta